Home Wararka Cabdiqani Carab oo xulkii qaranka u kala qaybiyay Qabiil & Qurbo-joog, fashilna...
Gudoomiyaha Xirirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa markii afaraad waxa uu Xulka Qaranka ee Xubadda Cagta u kala qaybiyay Qabiil iyo qurbo joogto. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa sare u soo kacaayay waayo-aragnimada xulka qaranka Soomaaliyeed taas ka timid da’daalka ay muujiyeen dhalinta ku nool dalka gudihiisa.
Da’daalkaan ayaan ku yimid rabitaanka iyo isxilqaanka cayaartooyda Xulka Qaranka. Hadaba Gudoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa isaga oo isticmaalaya qabiil uu dibdada uga saaray xulka Qaran cayaartooydii ugu fiicnayd xulka kuwaas oo horay guulo u soo hooyay shacabka Soomaaliyeed.
Ciyaartooydaan oo in mudo ah tababar uga socday dalka Jabuuti ayuu shanti ugu cayaarta fiicnayd oo uu ku jiro willka ugu laacibsan xulka ee qaaranka ee qaata number 10, horayna guulo u soo hooyay laga saaray xulka. Arintaan waxaa ka horyimid tababaha Belguim-Marooco ah, isagana shaqada laga fariisiyay.
“garoonka kubadda cagta waxa aan u buuxinaa maalin kastaa in aan daawano wiilasha ku soo barbaraay dalka iyaga oo aan lacag qaadana ciyaaraayay sanado badan, walaahi waan ka xanaaqay markii kuwa aan waligood Soomaaliya arag la dhaho xulka ayaad u ciyaaraysaan, mid kamida waligiis Soomaaliya ma imaan, xataa hooyadiin ma ku dhalan Soomaaliya… aniga waaba iska dhaafaa in aan tago garoonka.. Soomaali qabiil ma ka dhamaanaayo miyaa” ayuu yiri mid kamida dhalinta yar yar ee ku nool degmada Xamarweyne.
Cabdiqani Saciid Carab oo ayan jirin cid uu kala tashaday go’aanka uu wiilashii naftooda u soo huray in ay hormariyaan ciyaarta kubadda cagta Soomaaliya, iyaga oo ku noolaa xaalad adag uu ku badasho caruur ay ehel yihiin isaga, ama saaxibadiisa ka codsadeen in lagu daro xulka kuwaas oo laga keenay qurbaha.
Talaabada ku tagrifalka ee uu qaaday Cabdiqani Carab waa mid dhaawici doonta Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubbada Cagta iyo hanka dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudahiisa kuwaas oo naftooda halis u galiyay si ay u hormaariyaan Cayaaraha Dalka Soomaaliya. Waa lama huraan in Wasaarada caryaaraha ay si deg deg ah baaritaan ugu sameeysan talaabada qar iska tuurka ee uu qaatay Cabdiqani S. Carab iyo saaxiibiisa gaarka ah.